Isikhathi esining impela, ngemva kokudla kakhulu ice cream noma eminye imikhiqizo esiqandisini, kanye ngemva kokuphuza amanzi obandayo ngosuku olushisayo lwasehlobo iqala ukuhlekisa kancane emphinjeni, kulandele sebuhlungwini obunzima kwenzeka. Lokhu kusho ukuthi indawo yakho ibuthakathaka - the izitho zokuphefumula. A umsizi enkulu ekulweni nalenkinga umuthi "Chlorophyllipt". Lena isinqandakuvunda efakazelwe, okuyinto ubhekana uhlobo ezahlukene umphimbo obuhlungu.
Umgomo we operation futhi indlela yokwakheka izidakamizwa
Antiseptic, isithako kabani asebenzayo iqukethe akhiphe amaqabunga zikagamthilini - a "Chlorophyllipt". Gargling lokhu ukulungiselela evumela ukuba abhubhise amagciwane azalela ngalo ingaphakathi ngomlomo kanye engenhla ipheshana zokuphefumula, kanye-ke eminye kuvimbela ukukhula kwabo nasekuvezeni izithombo zaso ezintsha.
Lesi sidakamizwa ikhiqizwa umthamo amafomu ezine ezihlukene, umsebenzisi ngamunye angakhetha ofanele kakhulu babo. Ikakhulukazi, utshwala edayiswa Pharmacy kanye nekhambi namafutha, amaphilisi izifutho. Medicine "Chlorophyllipt" ubhekana nomphimbo obuhlungu, kuhlanganise okubangwa ukutheleleka staph. It ngempumelelo izenzo ngisho emacaleni lapho izilokazane ezincane emqaleni izinhlobo ezihlukahlukene kwamaphilisi ka isenzo ububanzi. Ukusetshenziswa njalo iningi izidakamizwa "Chlorophyllipt" - gargling nge isixazululo utshwala of laryngitis, namathansela, pharyngitis kanye nezifo sibi zokuphefumula. Kuyaphawuleka ukuthi ukunambitheka umuthi othize kakhulu, ngakho abanye bangase babe njengezingane ikhambi uwoyela emphinjeni Lubrication.
Njengoba lisetshenziswe imithi "Chlorophyllipt" izifo womphimbo?
Njengoba sekuphawuliwe kakade, ukusebenzisa esinye isixazululo uwoyela Ungasingatha iyiphi indawo emlonyeni nasemphinjeni. Ngokuqondene nokugcwaliseka le nqubo awunankinga abavamile ukotini swab. It bacwilisa lapho kulungiselelwa futhi ngobumnene ezigcotshwe izindawo ogcwele ukuchitheka ngangokunokwenzeka. Yiqiniso, le ndlela zingavumi, ngakho indlela yokukwenza wena kunzima ngokwanele, ingasaphathwa indlela yokukwenza ingane encane. Ngakho-ke kungcono ukuba baphendukele ochwepheshe bezokwelapha abazokwazi ukuba bafeze lo kunemidanti esheshayo nengebuhlungu.
Ukusetshenziswa okwandile "Chlorophyllipt" izidakamizwa - gargling. Ngenxa yale njongo, cishe ithisipuni elilodwa isixazululo utshwala sengezwe 100 ml yamanzi abilisiwe ekamelweni lokushisa.
Le mali isetshenziselwa yesikhathi esisodwa uhlambulule. Ubude usuku kudingeka kwenziwe izinqubo okungenani ezine ezifana. Okuwukuphela kwendlela ukugeza kahle zonke emphethweni emphinjeni. Leli nani uphelele kokubili ngabantwana nangabantu abadala.
Uma umphimbo obuhlungu ingane encane, bese umuthi "Chlorophyllipt" utshwala ngoba gargling, kanye isixazululo oily, cishe engasebenzi. Ezimweni ezinjalo, ikhambi ekahle ukuze inkinga kungaba ikhambi "Chlorophyllipt" e izifutho. Its lula kakhulu fafaza on a sore emphinjeni umntwana. Futhi, kulungele abadala abangakwazi ukuhahaza ngesikhathi esifanele, isibonelo, uma besemsebenzini noma ngomsebenzi.
Nomaphi lapho ukhetha uhlobo lesi sidakamizwa "Chlorophyllipt" - gargling, fafaza noma amaphilisi, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi unamanye Izimo. Ikakhulukazi, angagcina ukusabela iguliswa noma, ngamanye amazwi, avele isici esiyingqayizivele. Ukuze uthole ukuthi unakho yini lokhu inkinga, enze ukuhlolwa okusheshayo. Ukuze wenze lokhu isixazululo kancane utshwala sokuqanjwa namanzi endaweni isilinganiso 1: 1, ke tando suffice 25 amathonsi 25 ml amanzi ekamelweni lokushisa. Khona-ke ukuwasela bese ulinda yi. Kungaba ukuzibonakalisa amahora ayi-8. Uma lutho engavamile kwenzeka, khona-ke umuthi "Chlorophyllipt" ngeke anenzele okubi, futhi ungakwazi aphathe emphinjeni ngokuphepha. Uma kungenjalo, uma kukhona ukulunywa, ukuqubuka kwesikhumba, kanye ububomvu ezinzima mucosa we emlonyeni, kufanele ngokushesha kudokotela.
Ezinye Pharmacy ungathola izidakamizwa ngomumo eyenziwe "Chlorophyllipt -. Gargling" Yokusetshenziswa ngakho asemaphaketheni. Kusukela ke ungafunda kabanzi mayelana isimiso isinyathelo umthamo izifo ezahlukene.
Hel Angina esuka emphinjeni izifo
Yini wenze we-salmon: zokupheka